SO BAD to see you | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » SO BAD to see you
SO BAD to see you
Posted by စဆရ ကြီး on Nov 23, 2012 in Food, Drink & Recipes | 11 comments
ကျွန်တော် ခေါင်းကို တွင်တွင်ကြီးကုတ်မိသည်.. ဘယ်လိုသင်ကြားပြသရမည်မသိ.. သူတို့တွေခမျာ ပြောတော့ ပြောရှာပါ၏။ စပ်ဖြီးဖြီးမျက်နှာကြီးတွေနှင့်တစ်မျိုး၊ အသက်မပါ အပြုံးများဖြင့်တစ်ဖုံ၊ ရှိစုမဲ့စု Cashier လေးယောက်ကို တစ်ယောက်မှ သဘောမကျဖြစ်နေသည်။ သူတို့ဘက်ကတွေးလိုက်လျင်လဲ ဟုတ်တော့ဟုတ်နေသည်။ စကားတစ်ခွန်း So Good တစ်လုံးထည့်ပြောနေရသည်မှာ ပြောနေမကျသဖြင့်ထင်၊ ယားကျိကျိဖြစ်နေသည်မှာတော့ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဘယ်လို့ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဘယ်သူကအစမြှောက်ပေးလိုက်သည်မသိ၊ ထို So Good ကြီးအကြောင်းကို ကိုရင်ရှူံးတို့ သွားရောက်နားထောင်၊ လေ့လာခဲ့ရသည်မှာ အစည်းအဝေးခန်းတွင်ပင် ၇ နာရီခန့်ကြာလေသည်။
စဖတ်ဖတ်ခြင်းဆိုလျင် ဘာမှန်းမသိ ညာမှန်းမသိဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်သည်ကား ရွာထဲမှ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကင်ပွန်းတပ်ထားသော ကေအက်ဖ်စီ ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိပဲ ကြက်ဖင်ဆီဖူး ရောင်းသည့်ကောင်ဟု သိထားသည့် ထိုကဲ့သို့သောကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ရှိစေတော့.. မသိလို့မှားတဲ့ အမိုက်အမဲလေးမို့ ရှိစေတော့လေဟုသာ မှတ်ယူပါသည်။
ယခင်က It’s finger Licking Good ဆိုတုန်းက ဘာမှ သိပ်ထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်စရာမလိုပေ။ ထိုစဉ်က ဆောင်ပုဒ်သည် ဆောင်ပုဒ်မျှသာဖြစ်သည်။ ထိုဆောင်ပုဒ်အတွက် ဘာမျှ ထူးထူးခြားခြားလုပ်ရန်မလို။ ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သာဖြစ်သည်။ ထိုဆောင်ပုဒ်လေးမှုာ နာမည်ကျော်ကြားလာရသည်မှာလည်း ၁၉၅၀ ခန့်ကပင်ဖြစ်သည်။ ကေအက်ဖ်စီ မန်နေဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်သည့် Ken Harbough မှ ကြော်ငြာတစ်ခုတွင် လူတစ်ယောက် ကြော်ငြာနောက်ခံတွင် လက်ချောင်းများကို လျက်(ယက်)နေသည်ကို မြင်သည့်အတွက် ပြောဆိုကြရာ “Well, it’s finger liking good” ဟုပြောဆိုသည်မှစပြီး ၂၀ ရာစုနှစ်အတွင်း ထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့သည့် စကားလုံးအနေနှင့် သုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်တွင်မတော့ “Follow your taste” ဆိုသည့်စကားကို ၂၀၁၀ ထိသုံးစွဲခဲ့သော်လည်း နာမည်ကြော်ကြားခြင်းမရှိပါ။ ၂၀၁၁ တွင်မတော့ SO GOOD ဟူသောစကားလုံးဖြင့် ဈေးကွက်တွင်းထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ယူရန် ကြိုးစားလာခြင်းဖြစ်သည်။ စလုံးနှင့် မလေးရှားတို့တွင်မတော့ ယခင်နှစ်ကပင် စတင်နေပြီဖြစ်သော်လည်း အရှေ့အလည်ပိုင်းသို့ ယခုလတွင်းမှပင် စတင်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကိုရင်ရှူံးတို့ အလုပ်များရခြင်းဖြစ်သည်။
“Hi Sir, welcome to ကေအက်ဖ်စီ, so good to see you”
လွယ်လွယ်လေးပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်သောသူများမှ အာရပ်ယဉ်ကျေးမှုလေးပါစေရန် စကားအဆုံးတွင် ညာဘက်လက်ဖ၀ါးကို ဝေ့ပြလိုက်ရသေးသည်။
ထို့နောက် ဖောက်သည်အား မရမက၊ မ၀ယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်၊ မ၀ယ်ပဲ မပြန်သွားစေအောင်၊ ၀ယ်ချင်လာအောင် မြှူဆွယ်စည်းရုံးရသည်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Cashier – “ Would u like to try our new SO GOOD shrimps?”
Customer – “ NO!”
Cashier – “ It’s SO GOOD, you’ll like it”
(မ၀ယ်ပဲ မနေစေရန် မြှူဆွယ်ခြင်း)
Customer – “OK, let me try it’
Cashier – “Oh.. it’s SO GOOD choice sir, you want to make it with our SO GOOD cheese?”
Customer – “OK OK make it”
Cashier – “You like to add our SO GOOD crusher sir?”
Customer – “No, thanks!”
Cashier – “It’s SO GOOD sir”
(ကြည့်.. လူကိုလှောင်နေသလိုပဲ၊ ဖောက်သည်ကတော့ တွေးပေမည်။ အရောင်းစာရေးမမှာ သင်ထားသည့်အတိုင်း အခြေအနေမကြည့်ပဲပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။)
မကြာမီမှာပင် သူမှာထားသည့် အစားအစာ ကောင်တာစားပွဲပေါ်ရောက်လာသည်။ ထို့နောက် အရောင်းစာရေးမနှင့် ဖောက်သည်တို့ ပြောကြပုံကို ရှုပါလေ့။
Cashier – “Here is your SO GOOD order sir”
Customer – “Thanks!”
Cashier – “Thanks sir, enjoy with your SO GOOD ကေအက်ဖ်စီ”
Customer – “………..”
စာဖတ်သူများ ဖတ်ကြည့်ကြပါကုန်၊ ပြောရသူအဖို့ အဘယ်မျှ ယားကျိကျိဖြစ်မည်နည်း။ အခန့်မသင့်လျင် ဖောက်သည်မှ သူ့အားလှောင်လေသည်လားဟုစိတ်ဆိုး မာန်ဆိုး ပြန်အပြောခံရမည့်ကိန်းပင်။ လာရောက်ကြသူများမှာလည်း တစ်ခါမျှ မနှုတ်ဆက်ဖူးသည့် စကားလုံးအဆန်းကို ကြားလိုက်ရသည့်တစ်ခဏ တစ်ချို့လည်း ရယ်ပြုံးလျက်၊ တစ်ချို့လည်း ရူးနေသလားဟု ကြည့်လို့ကြည့်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့စိတ်ထဲတွင် ကေအက်ဖ်စီနှင့် SO GOOD ဆိုသည်ကို တွဲမြင်ကြစေရန် ကုမ္ပဏီမှ ရည်ရွယ်လိုရင်းဖြစ်ပေမည်။
ကိုရင်ရှူံးတို့ အရောင်းစာရေးမများ တစ်ပါတ်ခန့်လေ့ကျင့်ပြီးသည့်အခါ အတော်လေးအဆင်ပြေနေပြီဖြစ်လေသည်။ အနည်းငယ် နေသားကျလာပြီလဲဖြစ်သည်။ တစ်ရက်တွင်မတော့ ဘာမပြော ညာမပြောနှင့် Chain Manager မှာ SO GOOD လက်တွေ့ အသုံးချမချ စစ်ဆေးရန် ရုတ်တရက်ရောက်ချလာရာ အရောင်းစာရေးမများမှာ SO GOOD to see you ကိုပြောရန် မမေ့သော်လည်း လက်ကလေးဝှေ့ရမ်းပြရန်မေ့နေသဖြင့် ကိုရင်ရှူံးတို့ အသင်အပြ ညံ့လေခြင်းဟု ဆူပူကြိမ်းမောင်းသွားတာခံလိုက်ရသဖြင့် သူပြန်သွားသောအခါ ကျန်သူများမှ ကိုရင်ရှူံးအား အခြေအနေဘယ်လိုလဲဟု မေးမြန်းကြသဖြင့် ပြန်ဖြေမိသည်မှာတော့..
“SO BAD” ဟု ဖြစ်လေသတည်း…။
(ဘာရယ်ညာရယ်မဟုတ်… အလုပ်အတွင်းမှ တစ်နေ့တာကို ပြန်ပြောင်းပြောပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း)
ဒီက ကြော်ငြာမှာလည်း မကြည့်ဖြစ်ပဲ အသံပဲကြားတုန်းက ဘာကြော်ငြာမှန်းမသိပေါင်။
So Good တွေပဲ ကြားရတယ်။ ခု ထမင်းပါ ပါတဲ့ဟာပါရတယ်။ ဘာခေါ်လည်းမသိ။ မစားကြည့်ရသေးဘူး။ :harr:
စလုံး မှာ မရောင်း ခင် က ဘာတန်း မှာ ထမင်း နဲ့ တွဲ ရောင်း တာ တွေ့ ဖူး ပြီး အင်ဒို တွေ KFC ကို ထမင်း နဲ့ စား ကြတယ် ဆို ပြီး အထူးအဆန်း ဖြစ်၊ အတင်း ပြော ဖြစ်ခဲ့ သေး တယ်။
ကို ရင် စိုင်း ရေ ဒီမှာတော့ KFC က cheese fry ကို so good လွန်း လို့ လူလည်း so fat ဖြစ်နေပြီ။
So Good to read your post …
It’s so good today.
ဆိုး ..ဆိုး ဆိုး …….ဂွတ်
ပထမတော့ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး လန့် နေတာ
ခုတလော တိုက်ပွဲတွေကြားမှာ အသည်းငယ်နေလို့ …..
So Good writing Ko Sai.
၂-ထူးခြားမှန်း ချက်ချင်း သတိပြုမိလို့ ပိုအာရုံစိုက်ဖြစ်တယ်
၃-အဲဒါကြောင့် ပိုစမ်းသပ် သုံးစွဲမယ်
၄-အဲဒီအမှတ်အသားက အမြဲမြင်/ကြား/ထိတွေ့ နေရလို့ (တော်တော်အမြင်ကတ်လာရင်တောင်)
အဲဒါမျိုး ဒီမှာလဲ လေဆာတို့ စူပါတို့ ……..
so far so good ကိုရှုံး :harr:
လိမ့်ခွ၊ လွှတ်ပြော နေရမယ့်ကိန်းကိုးဗျ …
အိုက်ဒလို ပြောရမှာ ရီချင်စရာကြီးနော် …
ကိုရှုံး ပြောသလိုပဲ အခန့်မသင့်ရင်
ကာစတန်မာ ကတောင် ပြန်ဟောက်သွားမယ့်ကိန်း …